खुल्ला पत्र: ‘प्रधानमन्त्री ज्यु, उचालिने र थचारिने काम नगर्ने पाे हाे की ! - Nepal's Digital News Paper
खुल्ला पत्र: ‘प्रधानमन्त्री ज्यु, उचालिने र थचारिने काम नगर्ने पाे हाे की !
प्रकाशित मिति : सोमवार, असार २३, २०७६
सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपि ओलि ज्यु,
हार्दिक अभिवादन !
संसार बेलायतको गुलाम हुँदासमेत हाम्रा वीर पुर्खाहरुले नेपाललाई स्वाधिन राखेको इतिहास हामीले आध्ययन गरेका छौं । हामीलाई थाहा छ । हाम्रो छिमेकि मुलुक भारत समेत बेलायतको गुलाम बन्याे । हालको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका बेलायतको गुलाम भएको कुरा , इतिहास साक्षी छ । कसैकाे गुलाम नबनेकाे नेपालकाे इतिहाससामू उभिएर हामी आज स्वतन्त्रता महशुस गर्न सकिरहेका छैनाैं ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु, तपाई सत्तामा आइसकेपछि नेपाली जनताले निकै ठशूलो आश गरेका थिए । बर्सौ गरिबिमा पिल्सिएका नेपालीले तपाईको पालामा आफु समृद्ध हुने सपना देखेका थिए । आफ्ना सन्तानहरुले राम्रो शिक्षा दिक्षा पाउनेछन् भन्ने आश गरेका थिए । उनीहरुलाई अशा थियो, दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा झर्ने लाशहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउने छ । अझ भनौं स्नातकोत्तरको उपाधी ग्रहण गरेर श्रम मन्त्रालयबाट श्रमिकको अनुमती लिंदै अरब, मलेसिया, कतार, कोरियाजस्ता मुलुकका लागि लामबद्द हुने दिन समाप्त हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ज्यु , मेरो कुरा गर्ने हो भने आंशिक रुपमा म तपाईले गरेका कामहरुमा खुसी नै छु । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीमा सतिसाल भएर उभिएको कुरा मेरो मानसपटलमा अझ ताजै छ । तर, आश गरे अनुरुप कार्य हुन नसकेको गुनसो आम जनताको छ । हामीलाई डर छ, कतै नेपाल नवउपनिवेश बन्ने त होइन ? हाम्रो स्वाधिनता ,सार्बभौमिकत , स्वतन्त्रता आत्मसम्मान, मौलिकतामा ठेश नलागोस्। हाम्रा सन्ततिले विश्वमानचित्रमा हराएको सिमा खोज्न नपरोस् । हाम्रा सन्तानहरुले वीर गोर्खाली र नामर्द नेपाली गरी दुई थरि इतिहास पढ्नु नपरोस्। भ्रस्टाचारले कुरुप भएको राष्ट्र बेहाेर्नुनपराेस् ।
प्रधानमन्त्री ज्यु, तपाई सत्तामा आएपछि जनताले साेचेका थिए संस्थागत भ्रस्टाचारमा कमी आउने छ । जनता पानी पिउन नपाउने स्थितिकाे अन्त्य हुनेछ । स्वदेशमै राेजगारी पाइनेछ । तुइन भाषणमा मात्र हाेइन, वास्तमै म्युनियममा राखिनेछ । तुइन विस्थापित हुनेछ । सरकारी शिक्षा र स्वस्थ्यकाे गुणस्तरमा भारी वृद्धि गरिनेछ । गरिवीका कारण गुणस्तरिय शिक्षा र स्वस्थ्यबाट काेही बञ्चित हुनुपर्दैन । तर, यी सबै कुरै मात्र भए । केही नभएका हाेइनन्, तर भनिएकाे अनुसार तर सारै थाेरै भयाे ।
नेपाली बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनले मात्र स्थान प्राप्त गरुन भन्ने चाहना जनताको थियो । नेपालका चेलीहरु बोक्सीको आरोपमा प्रताडित हुन नपरोस साथै अबोध र अबला चेलीहरु ब्यभिचारिको नजरमा नपरुन । तर तपाईकै शासनकालमा निर्मला पन्तहरु सुरक्षित हुनसकेनन् । तपाईलाई थाहा छ, नेपालमा काजोल खातुनहरु सुरक्षित छैनन् । अनिता यादबहरु सुरक्षित छैनन् । तपाईकाे शासनमा नेपाली जनताले गरेकाे अपेक्षा यस्ताे हुँदै हाेइन ।
विगतदेखि विग्रदै आएकाे देशकाे थिती रातारात राम्राे हुन सक्दैन । तपाईले धेरै काम सफलतापूर्वक गर्नुपनि भएकाे छ । तुइन विस्थापनकाे सवालमा काम भैनै रहेकाे छ । सिन्डिकेटकाे दादागिरीमाथि तपाईकाे सरकारले चालेकाे कदम प्रश‌ंसा गर्न लायन छ ।
प्रधानमन्त्री ज्यु , तपाइलाई एउटा आरोप लाग्ने गर्छ कि तपाई एक्कासी उचालिनुहुन्छ र थचक्क बस्नु हुन्छ । त्यो कुरालाई अहिले भर्खरै भारतबाट आयात हुने तरकारीमा बिसादी चेक जाँच गर्ने बिषयले प्रमाणित गरेको छ । कृपया यसरी उचालिने र पछारिने कुरामा बिचार पुर्याउदा अलि सरकारलाई र देशलाई पनि कम हानी हुन्थ्याे कि ? भारतबाट बिषाधि मिसिएको तरकारी आयात हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले तपाईंबाटै थाहा पाएका छ्न् । तर, याे विषयमा किन तपाई भारतसँग झुक्नुभयाे ? जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । यसकाे जवाफ तपाईले नेपाली जनतासामू दिनै पर्छ । यस्ता थुप्रै कुराहरु छन् ।
अन्तमा, तपाईप्रति थुप्रै आलाेचनाहरु हुँदाहुँदै पनि आशा छ तपाईले विषादी मिसिएकाे तरकारी जनतालाई खान बाध्य पार्नुहुने छैन । तपाइकै पालामा नेपाल समृद्ध बनाेस् । निर्माला पन्तहरुले न्याय पाउन । द्वन्द्वका काला बादलहरु पाटार जाउन । सिमाबाट हराएका पिलरहरु पुन: यथास्थानमा गडिन सकाेस् । देशकाे रक्षाका लागि जीवनकाे आहुती दिने गोबिन्द गौतमका आत्माले शान्ति पाउनसकाेस् ! कुरा कम र काम बढी भएकाे देख्न पाइयाेस् । अर्काे चुनावसम्म जाँदा जनतालाई तपाईकाे दलकाे नाम सुन्नै मन नलाग्ने नबनाेस् । जनता खुसी हुनेगरी विकासका काम बनाेस् । तपाईकै कार्यकर्ताबाट भ्रष्टचार अचाक्ली बढेकाे छ । त्यसकाे नियन्त्रणका ढिला नगरियाेस् । शभकामना !
के रवि लामिछाने क्रान्तिकै विकल्प हुन् ?
‘हामी छिट्टै मारिन्छौं भनेर अलग–अलग फोटो खिचेका थियौं’
‘दाताले पत्याएनन् भन्न पनि भ्याउँछन् मान्छेहरू’
अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति र नयाँ राजनीतिक प्रणाली
तपाईंहरू अन्याय नगर्नुस्, प्रधानमन्त्री बालाई विश्राम गर्न दिनुस् : गगन थापा
रोमाञ्चकारी यात्रा मुगु कर्णालीको
एनसेल विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्छाैं: कमल थापा
प्राथमिक तहको थप ४ जिल्लाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक (नतिजासहित)
‘जननिर्वाचित संस्थामाथि गालीगलोज गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कारबाही हुनुपर्छ’
नेपालमा लगानीको वातावरण छ, पर्याप्त मुनाफा हुन्छ: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावाली
डेङ्गु आतंक: सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघ्यो
प्रकाश दाहाल स्मृति राष्ट्रिय भलिबल, उपाधिका लागि पुलिस र आर्मी भिड्ने
प्राथमिक तहको पाँच जिल्लाको नतिजा प्रकाशित (नतिजासहित)
धानबारीमा आकस्मिक अवतरण गरिएका हेलिकप्टर (फाेटाेफिचर)
घरमा आगलागीपछि राजेशपायलले भने– भगवानबाट पनि गल्ती हुँदो रहेछ
सरकारको गति र मति ठिक भए परिवर्तन विरोधी आफै परास्त हुन्छन्: गगन थापा